China Anti-Ileghara Wood Plastic mejupụtara WPC Solid Decking emepụta na suppliers | Lihua
Solid siri ike
WPC Mgbidi Mgbidi
Nkịtị Mgbidi Mgbidi
WPC N'onwe Decking
Usoro WPC Ogige
WPC Ogige Bench
WPC Ifuru ite
Anti-Ileghara Wood Plastic mejupụtara WPC Solid Decking
Inwe ihe onwunwe: WPC Decking
Nkebi Nke: LH140S22.5A
Kwụ ụgwọ: NT / LC
Ahịa: $ 2.82 / M
Mmalite ngwaahịa: China
Agba: Kọfị, chọkọleti, aja aja, isi awọ, osisi sida na wdg
Port Mbupu: Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai
Etiti oge: 7-16 YBỌCH.
3.6m, 4.2m ma ọ bụ ahaziri
Ogige mmiri, Ogige, Ebe igwu mmiri
● WPC decking isi ihe bu Pee, akwara osisi na ihe mgbakwunye WPC decking bụ ihe ewu ewu n'ụwa niile ka anyị na-eji ihe okike.
● WPC anyị decking mara mma ma mara mma osisi ọka udidi, metụta mfe echichi, si otú ahụ nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke customers.It nwere ike idet, kpọgidere, gbapuru na bee dabara ngwa nke dị iche iche nkọwa, dị ka odida obodo, n'èzí ubi, ogige, nnukwu ụlọ ahịa, wdg.
WPC anyị decking bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, n'ụzọ zuru ezu recyclable na ọ dịghị ọzọ ihe ize ndụ chemical, ọ dịghị mkpa sere, ọ dịghị mama na ala mmezi.
De Decking anyị nwere ikike ihu igwe dị mma, ọ nwere ike ịdị mma site na -40 ℃ ruo + 60 ℃ .Anwere ike iji decking anyị WPC mee ihe na ụwa niile .N'ihi na mbadamba anyị na-eguzogide ihu igwe, mgbochi iwepụ, obere mgbawa, ike, ụkwụ ụkwụ enyi na enyi. .Plus UV mmako ka anyị mbadamba UV eguzogide, ịjụ oyi na-eguzogide ọgwụ na durable.Good akụkụ kwụsie ike megide mmiri na okpomọkụ.
Ileghara Nguzogide Nkụ
EN 15534-1: 2014 Nkebi nke 6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.4
Ntuziaka Longtitudinal: Pụtara 72, Min 70 Usoro ihu: Pụtara 79, Min 78
Ileghara Nguzogide Wet
Ntuziaka Longtitudinal: Pụtara 46, Min 44 Usoro ihu: pụtara 55, Min 53
Resistanceda iguzogide oke mmetụta
EN 15534-1: 2014 Nkebi7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.1
Enweghị nke ịkọ nkọ ga-ada na mgbape ogologo crack10mm ma ọ bụ omimi nke mmapụta indentation≥0.5mm
Max.Crack ogologo (mm): Ọ dịghị mgbape Max. Ntughari obi (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.2
-Deflection n'okpuru ibu nke 500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm
Ike Bending: 27.4 MPa Modulus nke elasiticity: 3969 MPa Oke kachasị: Pụtara 3786N, Min 3540N Nkpuchi na 500N: Pụtara: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.4.1 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.3
Mara amara iji ya: Pụtara ∆S≤10mm, Max ∆S≤13mm, Pụtara ∆Sr≤5mm
Oge: 330mm, MeanS 65 1.65mm, Max 1.S 1.72mm, Pụtara ∆Sr 1.27mm
Mgbu mmiri na mmiri mmiri
EN 15534-1: 2014 Nkebi 8.3.1 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.5
Mgbapụta pụtara: ≤4% na ọkpụrụkpụ, -0.8% n'obosara, -0.4% n'ogologo Max ọzịza: ≤5% na ọkpụrụkpụ, -1.2% n'obosara, -0.6% n'ogologo Mmiri mmiri: Pụtara: -7%, Max : ≤9%
Mgbapụta Ọbara: 1.81% na ọkpụrụkpụ, 0.22% n'obosara, 0.36% n'ogologo Max Ọcha: 2.36% n'ogologo, 0.23% n'obosara, 0.44% n'ogologo Mmiri mmiri: Pụtara: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Nkebi8.3.3 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.5
Mmiri mmiri na-ebu ibu: Mean≤7%, Max %9%
Mmiri mmiri dị arọ: Pụtara: 3.06%, Max: 3.34%
Linear thermal mgbasa ọnụọgụ
EN 15534-1: 2014 Nkebi 9.2 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.5 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.7
Brinell ekweghị: 79 MPa Rate nke na-agbanwe mgbake: 65%
EN 15534-1: 2014 Nkebi nke 3.3 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.7 EN 479: 2018
Okpomọkụ Ule: 100 ℃ Pụtara: 0.09%
Nke gara aga: Low Mmezi mgbochi-ileghara WPC oghere Decking Mpụga
Osote: UV Nguzogide Mmi Embossed Solid WPC Decking Mpụga
Ntuziaka nwụnye Boards
Na echichi na nlekọta kwesịrị ekwesị, ngwaahịa osisi na-ekwe nkwa inye afọ nke ndụ dị n'èzí. Iji nweta nsogbu na-enweghị nsogbu nke ngwaahịa osisi:
-Consult mpaghara ụlọ Koodu tupu echichi.
-Familiarize onwe gị ntuziaka nwụnye.
-Gbaa mbọ hụ na ị nwere ngwa ọrụ na akụrụngwa niile dị ka edepụtara na mpempe akwụkwọ ntuziaka.
Nchekwa na Ijikwa
-Agbanyela ihe osisi mgbe ị na-ebudata ya.
-Store na a ewepụghị elu na-ekpuchi na-abụghị translucent ihe onwunwe.
-Mgbe na-ebu osisi osisi, na-aga n'ihu maka nkwado ka mma.
-Refer ntuziaka nwụnye maka ụkpụrụ nduzi ndị ọzọ na ngwaahịa ọ bụla.
Nlekọta na Ijikwa ntuziaka maka decking
Iji belata ọkọ, nkpọtu, ihe ọkụkọ na ntanetị, ma chekwaa mma nke decking osisi. Soro ntuziaka ndị a:
-Ekwela slịl megide ibe gị mgbe ị na-ebugharị ha. Mgbe ị na-ewepu ha na otu, bulie oche ahụ wee debe ha.
Emela ihe ndi ozo ma obu bugharia ngwa ngwa n’elu oche mgbe a na-ewu ya.
- Nọgidenụ na-ekpuchi ebe a na-ekpofu ihe site na mkpofu ihe mkpofu.
Ozi Dị Mkpa
- Mgbe ị na-arụ ọrụ na ngwaahịa osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla ụlọ, jide n'aka na ị ga-eyi uwe kwesịrị ekwesị na akụrụngwa nchekwa.
-N'ihi na osisi niile, ọkọlọtọ osisi na-arụ ọrụ ngwaọrụ nwere ike iji, dị ka kwa na ọdabara emeputa ntụziaka.
-Scrap nwere ike tụfuo na nkịtị na-ewu mpekere.
-wood nwere oke mmịfe na-eguzogide mmiri ma ọ bụ ọkọchị.
-wood nwere ihe nkpuchi zoro ezo zoro ezo ma di mfe iji tinye mkpachị osisi.
-Iji opekata mpe # 8 x 2-1 / 2 dị elu, igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ihe mejupụtara oche.
-Pre-mkpọpu ala achọrọ na ihu igwe oyi na mgbe n'ime 1-1 / 2 "nke njedebe nke oche
- Ejila gluu ma ọ bụ caulk kpọchie osisi ma ọ bụ mechie nkwonkwo n'etiti oche abụọ na ebe ọ bụla ọzọ .Nke a ga - egbochi mmeba nke okike na mgbatị nke osisi ahụ ma gbochie nsị nke oche ahụ.
Achọrọ Ikuku Ezi Uche
- Iji belata iru mmiri-elu si n'okpuru oche ， ga-enwerịrị opekempe
nke 12 ”ikuku sara mbara nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'akụkụ atọ nke oche iji nye ohere maka ikuku ikuku.
Ekwesịrị ịchọta nke a n'okpuru ala nke ihe egwu egwu.
-N'ime ụfọdụ ngwa ngwa, gụnyere oche ndị ewuru n'akụkụ nkuku, a ga-achọrọ ikuku ikuku ọzọ ebe oche ahụ ga-ezute ụlọ ahụ. Enweghị ike ịnye ezigbo ikuku ikuku nwere ike ime ka ọdịda oche daa, ọ ga-emebi akwụkwọ ikike ahụ.
Ntuziaka Ntuziaka Lisen Decking
You nwere ike ịchekwa oge owuwu ụlọ na ụgwọ site na ịmebe, chee ịhazi atụmatụ ihe dị mkpa dịka ebumnuche mmemme ahụ. Nwere ike ịhọrọ ihe nke aka gị dị ka ịchọrọ site na iji ọtụtụ ụdị nhọrọ osisi, ihe owuwu osisi, ọrụ ịwa osisi nwere ike iji maka igbutu, ịcha osisi, ịkụ ala na wdg
Mgbe ị wụnye ihe mkpuchi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ndọtị na-eme ka ala sie ike, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọkwa egwuregwu maka 35-40cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Tụlee oghere 3cm maka ụlọ ahụ mgbe ị na-etinye akwa.
Nkwonkwo kit nke osisi decking bụ igwe anaghị agba nchara. Drgbapu ala kwesịrị ịdị obere karịa dayameta nke ihe nkedo nke 3/4 iji mee ka njide onwe onye na-ejide onwe ya nke mbọ.
Kụtuo decking ahụ ngwa ngwa na ngwa nke roba haama n'oge iwu iji jide n'aka na ọdịiche dị nha na mma ụlọ ahụ mara mma.
A ga-emetụta ogologo nke mpempe akwụkwọ n'ihi nnukwu ebe a na-ewu ihe. Anyị na-akwado ngalaba nke oghere 5mm mgbe achọrọ akụkụ obe.
1. ounwere ike ijikọ uzo na ihe nkedo na kposara onwe gị ma ọ bụrụ na obere vidiyo adịghị maka njikọ njikọ ahụ na decking ahụ.
Họrọ osisi na-arụkọ ọrụ ọnụ ka ọ bụrụ ọnụ ọnụ dịka ogo nke olulu ahụ na decking mgbe emechara ya.
Nwụnye Fig nke obere vidiyo
Mgbe ị wụnye ihe mkpuchi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ndọtị na-eme ka ala sie ike, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọkwa egwuregwu maka 35-40 cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Ọzọ jikọrọ ọnụ nke osisi decking bụ plastic ígwè mkpachị. Drgbapu ala kwesịrị ịdị obere karịa dayameta nke ihe nkedo nke 3/4 iji mee ka njide onwe onye na-ejide onwe ya nke mbọ.
Nwere ike ijikọ uzo na egwu ahụ na kposara na-ejide onwe gị ma ọ bụrụ na mkpachị adịghị na njikọ njikọ ahụ na decking.
Wụnye ihe nkpuchi siri ike
Mgbe ị wụnye ihe mkpuchi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ndọtị na-eme ka ala sie ike, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọ joụ egwuregwu maka 35-40cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Tụlee oghere 3cm maka ụlọ ahụ mgbe ị na-etinye nkwụnye siri ike Wụnye ihe mkpuchi siri ike na mbọ a na-ahụ anya ma debe ntu ahụ 2cm n'akụkụ.
Tinyegharịa usoro ahụ.
Anti-ileghara WPC decking
siri ike WPC decking
Osisi mejupụtara plastic decking
China emeputa 3D embossed 157x16mm firepro ...
Anti-ileghara Low Mmezi Wood mejupụtara WPC De ...
Ahụhụ Mgbochi N'èzí Waterproof Plastic WP ...
Easy echichi N'èzí mejupụtara oghere Decking
UV Nguzogide Mpụga Wood Plastic mejupụtara D ...
Environmental nchedo ji achọ mma ...
No.46 nke okporo ụzọ baishijian,
langxi ulo oru mpaghara,
Email: alice@lisenwpc.com Tel: 0086-0563-3830116 Ekwentị: 0086-13635632626
Maka WhatsApp na WeChat
Copyright - 2021-2025: All Rights echekwabara.
N'èzí WPC decking, WPC n'èzí decking, osisi plastic mejupụtara decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ, WPC mejupụtara decking,